"Phil Foden Ayaa Ka Wanaagsan Rashford Iyo Greenwood, Waxaanu Xataa Ka Sarrayn Doonaa David Silva" - Gool24.Net
“Phil Foden Ayaa Ka Wanaagsan Rashford Iyo Greenwood, Waxaanu Xataa Ka Sarrayn Doonaa David Silva”
Halyeygii khadka dhexe uga ciyaari jiray Tottenham iyo Wolves ee Jamie O’Hara ayaa rumaysan in kubbad-sameeyaha da’da yar ee Manchester City ee Phil Foden uu ka wanaagsan yahay xiddigaha Manchester United ee Marcus Rashford iyo Mason Greenwood, isla markaana uu dhaafi doono heerkii David Silva.
Phil Foden oo ay da’diisu tahay 20 jir ayaa qayb laxaad leh ka qaatay xili ciyaareedka Manchester City, waxaana kobcintiisa xirfadeed kaalin weyn ku leh tababare Pep Guardiola oo ka joojiyey in lagu bixiyo amaah, isla markaana kulamo badan ka dhigay safka hore, isagoo booska uga saaray David Silva iyo Bernardo Silva.
Kulankii ay Man City guusha weyn ka gaadhay Real Madrid wareegga 16ka tartanka Champions League, waxa uu Foden ahaa xulashadii koowaad ee garoonka soo gashay iyadoo ay kaydka kasoo muuqdeen laacibiin waaweyn oo uu ka mid yahay Riyad Mahrez, waxaanu kulankan iyo ciyaaro kaleba caddeeyey in Guardiola ku saxsan yahay inuu ku aamino masuuliyadda kooxda.
Jamie O’Hara oo la hadlayay warbaahinta talkSPORT ahyaa waxa uu tilmaamay in Foden oo ay da’diidu yar tahay uu ka fiican yahay Rashford iyo Greenwood, isla markaana uu kasii sarrayn doono heerkii ciyaareed David Silva oo ah uu booskiisa la wareegayo marka uu ruug-caddaaga reer Spain ka baxo Etihad Stadium dhamaadka tartanka Champions League.
“Aniga fikirkayga, waxa uu Foden ka mid yahay ciyaartoydii ugu wanaagsanaa ee abid aynu ku aragno England.” Ayuu yidhi Jamie O’Hara oo sii raaciyey: “Waxaynu ka hadalnaa David Silva oo ah halyeyga Man City marka laga eego wixii uu qabtay, laakiin wuxuu ka tegay kooxda markii uu noqday sidii maqaal dhamaaday.
“Aniga waxay ila tahay, in Phil Foden uu ka fiicnaan doono Silva. Wuxuu mar horeba taas ku muujiyey kulankii Real Madrid isagoo waliba carruur ah.”
Jamie O’Hara waxa uu hoos u dhigay heerka la gaadhsiinayo xiddigaha Manchester United ee Marcus Rashford iyo Greenwood, waxaanu yidhi: “Qof waliba wuxuu ka hadlayaa Greenwood, Rashford iyo dhamaan ciyaartoydan wanaagsan ee da’da yar, laakiin Foden ayaa ugu wanaagsan, waxaanu noqon doonaa xiddiga ugu wanaagsan England.”
Waxa kale oo uu Jamie O’Hara tilmaamay sababaha uu Phil Foden uga wanaagsan yahay ciyaaryahannada sare ku xusan, waxaanu yidhi: “Ka ciyaarsiiya meel walba oo uu doonayo. Waxay ila tahay inuu ka ciyaari karayo meel kasta.”